မြစ်ဆုံ Media Group: April 2016
ခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ ဆီမလို ကိုရီးယား ဒယ်အိုးလေးတွေ ရောင်းနေကြတာတွေပါတယ် မိမိပါ ရောင်းဖို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ ယူဈေးက ၁၆၀၀၀လောက်ပါပဲ ၂သောင်းလောက်အထိ ဈေးတင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်
ခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ ဆီမလို ကိုရီးယား ဒယ်အိုးလေးတွေ ရောင်းနေကြတာတွေပါတယ် မိမိပါ ရောင်းဖို့ စုံစမ်းကြည့်တော့ ယူဈေးက ၁၆၀၀၀လောက်ပါပဲ ၂သောင်းလောက်အထိ ဈေးတင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ရောင်းတဲ့သူတွေကို ထိခိုက်စေဖို့မဟုတ်ပါဘူး မိမိဝယ်သူတွေကို သိစေချင်တဲ့စေတနာသက်သက်ပါ
အဲ့တော့ပစ္စည်းအကြောင်းလေး မရောင်းခင် စုံစမ်းကြည့်တယ် ကိုရီးယား ဒယ်အိုးလို့ပြောရောင်းနေကြတာ အားလုံး တရုတ်က၀င်တာပါ တံဆိပ်ပေါင်းစုံနဲ့ပါ အဓိက ကတော့ဆီမကပ် အိုးမတူးအောင် ဓာတုသုတ်ဆေး တမျိုးသုံးထားတာပါ အဲ့ဒါက ပြသာနာပါ အပူချိန် ၄၀ ကျော်သွားတာနဲ့ သုတ်ဆေးက ဓာတု ဓာတ်တွေ အစားအစာထဲပျော်ဝင်လာပြီး ခဲဆိပ်သင့်တတ်ပါတယ် ကြာလာတဲ့အမျှ ဆေးတွေကွာလာပြီး စားစရာထဲပါသွားရင် အဲ့သုတ်ဆေးက အစာအိပ်တနေရာမှာ ကပ်ပြီး ဇီဝ ဖြစ်စဉ်ကို ဖျက်ဆီးပါတယ် ကပ်နေတဲ့အနီးတဝိုက်မှာ ဆဲလ်တွေ ပုပ်လာပါတယ် နောက်ပြီး ဆဲလ်အသစ်မဖြစ်တော့ပဲ အူမကြီး ကင်ဆာသို့ရောက်လာပါတယ် စားသောက်နေကြသူတွေလည်း သန်းဝေတာတို့ နုံးချိညောင်းညာ တာတို့ အားယုတ်သလိုမျိုးတွေခံစားပြီး ခဲဆိပ်သင့်ကြပါတယ် တရုတ်ကတော့ အရေသွေးမကောင်းတာတွေကို ပေါချောင်ကောင်း လုပ်ရောင်းနေကြတာပါပဲ တကယ် ဒယ်အိုးစစ်ရှိပါတယ် သူကတော့ အိုးရဲ့အသားကိုက ဆီမစုပ်အောင် လုပ်ထားတဲ့စစ်ပါ သိပ်ကောင်းပါတယ် ဆီထည့်လိုက်ရင်လဲ ဝေ့ဆင်းသွားတယ် လက်နဲ့ပွတ်ကြည့်ရင် ကျောက်အသားတိုင်းပဲ အနည်းငယ်လေး ကြမ်းနေတတ်ပါတယ် us 499 ကနေ 600 ထိဈေးရှိပါတယ် မြန်မာငွေ ၅သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲ မိမိဈေးဝယ်သူများ ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖြန့်ဝေတာပါ ၀ယ်ချင်လို့မေးသူတွေ အတုလားလို့မေးရင် ဖြေပါ့မယ်အတုပါ အစစ်ဆိုရင် သိန်းကျော်ပါတယ် ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘေးဖြစ်ဖို့ မလိုလားပါဘူး ရောင်းသူတွေကိုလဲ မတိုက်ခိုက်ပါဘူး တရုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရေသွေး ညံ့ဖျင်းမူကို မျှဝေတာပါ
မြစ်ဆုံ Media group
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက် ... လမ်းတစ်လမ်း ငါးနှစ်မှ မခံရင် ... အင်ဂျင်နီယာ ထောင်ထဲထည့်မယ် ဆိုတော့ ... ကိုယ်တွေလဲ ဝမ်းသာအားရ ... လက်ခုပ်တီးမိတယ် ... မိုက်တယ်ပေါ့ ...
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက် ...
လမ်းတစ်လမ်း ငါးနှစ်မှ မခံရင် ...
အင်ဂျင်နီယာ ထောင်ထဲထည့်မယ် ဆိုတော့ ...
ကိုယ်တွေလဲ ဝမ်းသာအားရ ...
နောက်မှ သေချာစဉ်းစားမိတယ် ...
သူမှ မရှိတော့တာ ...
မနေ့အိပ်မပျော်တာနဲ့ Fb နဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာ ကြိုက်တာလေးတွေ ပြန်တင်လိုက်မယ်
(အစိုးရ ကို ဆန္ဒပြလို့ အရေးယူတာလားဟင်)
ပြန် ၀န်ကြီးဟောင်းက (ဘယ်သူမှ အပြစ်မတင်တော့ဘူး အင်ဗာတာနဲ့ နေတော့မယ် ) တင်ထားတာ မန့်ပေါင်း ၁၂၀၀ ကျော် ဆဲကြတယ်
(သင်တန်းက ဘာတွေ သင်ပေးလိုက်တာလဲ)
(မြန်မာနိုင်ငံ ထရိုဂျန် မြင်းရုပ်ကြီးကရောက်နေ တာကြာပေါ့ ခုအသက်ဝင်လာပြီ)
(ခွင့်ပြုမိန့် မြို့နယ် လွှဲပေးတာ ချီးပဲပါ သေးမပေါက်နဲ့ ပြောတာလား)
(လူများတိတိကျကျ မသိသေးတဲ့ စုကြီးနဲ့ စုလတ်) သီပေါမင်းပြောတာ
(နေပြည်တော် မြွေအလွန်ပေါ မြက်ခင်းပြင် အိပ်က သတိထားရန်)
(ကဲ ငါအိမ်သာဆေးတာ ရိုက်လိုက်အုံး)
(ကဲ တို့ရုံးပါ မီးပျက်ပြီ ဒီအချိန်ထိ အလုပ်လုပ်တာ ပြည်သူတွေ သိစေချင်တယ် ဖယောင်းတိုင် အဆင်သင့်လား ဖယောင်းတိုင် ထွန်းပြီးရင် မိန်းခဏ ချထားအုံး ကဲ ready)
( ၇ ယောက်ဆိုတော့ ခြင်းခတ်ရတာပေါ့)
(မျက်ရည် မချူနဲ့ ဗကပ လမ်းစဉ် မကြိုက်ဘူး)
(မြန်မာနိုင်ငံကို နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီးသူ မရှိတော့လို့ ဥပဒေ ဖျက်လိုက်တာ ဘာဖြစ်လဲ)
(အဖွဲ့ချုပ် ဆိုတော့ --------)
(ဒေါသတကြီးနဲ့ ထွက်သွားရင် ဘုန်းတော်ကြောင့် ပြည်တောင်းခန့် မိုးသီးများ ကျလတံ့)
သူများတွေရေးထားတာ တစ်ချို့ဟာတွေက သိပ်နားမလည်ဘူးးးးး
၂၀၁၆ ဧပြီ သတင်းအကျဉ်းချုပ် -------------------------------------------
၂၀၁၆ ဧပြီ သတင်းအကျဉ်းချုပ်
- မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေဘုရားအနီးတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးထားသော ဗလီမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၏ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြီး
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ တောရွာကလေး၏ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအနီး ဘုရားလာတည်ခြင်းမှာမူ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ဖန်တီးခြင်း လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အင်မတန်ယဉ်ကျေး၍ ကြင်နာစိတ်ကြီးမားသော မဟာပညာတတ် မြန်မာလူမျိုးများမှ သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် ။
- ဗုဒ္ဓဘုရားဆင်းတုတော်များစွာ ထားရှိကိုးကွယ်၍ အောက်စီဂျင်ဘူးတပ်၍ အသက်ဆက်နေရပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ တရားဟောနေရသော မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်မှာ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားဖြစ်၍
မျက်နှာဖုံးများစွပ်ကာ စိမ်ခေါ်သော စာတန်းမျိုးစုံ ကိုင်ဆောင်ထားသော လူငယ်များနှင့် တုတ်များဓားများ အက်ဆစ်ဗူးများ ဓာတ်ဆီဗူးများ ကိုင်ဆောင်ထားသော တကမ္ဘာလုံးတွင် လူဦးသန်း၂ထောင်ကျော်သော ဘာသာဝင်လူနည်းစုများမှာမူ
ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ များဖြစ်ကြသည် ။
- ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် မီးပျက်ခြင်းမှာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏တာဝန်ဖြစ်ပြီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မီးပျက်ခြင်းမှာလည်း မရှိတော့သော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ တာဝန်ပေါ့လျော့ခဲ့မှုကြောင့်ပင်ဖြစ်သည် ။
- မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်္ကြန်ပွဲတော်အား ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပြီးစီးလို၍ မဏ္ဏပ်တည်ဆောက်ခွင့်များပိတ်ပင်ခဲ့သော ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအား ဂုဏ်ပြုသောအနေဖြင့် ကြီးမြတ်သော ရခိုင့်တပ်မတော်မှ ရွာထဲအပျော်လာကြူးသော နယ်ချဲ့ မျက်နှာနီ မြန်မာစစ်သားများအား သေနတ်ဖြင့် သူရဲကောင်းဆန်ဆန်ချောင်းမြောင်းပစ်ဖောက် သတ်ဖြတ်ကာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည် ။
- " အမေစုကြောင့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူး "
ရာသက်ပန်သူရဲကောင်းများဘဝမှ သမိုင်းမှာစောက်ပေါအကျဆုံးလူသားများ အဖြစ်သို့ ထိုစကားတစ်ခွန်းတည်းရေရွတ်ရုံဖြင့်ပြောင်းလဲသွားသော လွတ်မြာက်သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများထံသို့ ကမ္ဘာ့မှော်ပညာအသင်းချုပ်မှ အလွန်အစွမ်းထက်သော ထိုအသွင်ပြောင်းဂါထာကို လာရောက်လေ့လာပြီး လက်တင်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုခိုင်းမည်ဟုသတင်းရရှိသည် ။
- မြန်မာနိုင်ငံရှိ အကယ်ဒမီပေးပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်
အမေရိကန်ရှိအာဏာရအစိုးရမှ Hollywood တာဝန်ရှိသူများအား နောက်နှစ်အော်စကာဆုပေးပွဲလုပ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကယ်ဒမီပေးပွဲအားအတုယူ၍ ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည် ။
အကြောင်းကိစ္စတခုခုဖြစ်ပေါ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဥာဏ်ပညာကြီးမားသူများ၏ လက်သုံးစကားမှာ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်အတွင်း
" အစိုးရလှည့်ကွက် " ဆိုသော စကားစုမှ ၂၀၁၆ မတ်လမှစ၍ ယနေ့ထိ " အရင်အစိုးရ လှည့်ကွက် " ဆိုသော စကားစုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းသိရသည် ။
Credit...Chaw Na Kyal
နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ယင်းလူမျိုးအမည်နှင့် တိုင်းရင်းသား မရှိလို့ မရှိဘူးလို့ ပြောတာ လူမျိုးရေးခွဲမှု (racism) မဟုတ်ပါ။
သမိုင်းအထောက်အထားများအရ မရှိလို့ မရှိဘူးပြောသူတွေဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ racist မဟုတ်ပါ။
မရှိတဲ့ အမည်ကို သုံးစွဲသူများသာ လုပ်ဇာတ်ခင်းနေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်မည်သည့် ဘက်ကမှ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသား သမိုင်းကို သုတေသနပြုနေသူ တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း = ဆရာ ဈာန်သစ်အောင်
ရိုဟင်ဂျာကို မကန့်ကွက်ချင်လို့ ပြည်သူတွေအာရုံပြောင်းအောင် NLD အမတ်တွေ ဝံချီးတွေ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး စောက်ရူးအကွက်တွေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ခင်းကျင်းပြလိမ့်မယ်။
ဒါမှ ၂၁ ရာစု ပင်လုံဆိုပြီး ပြည်ထောင်စုကွဲအောင်လုပ်နိုင်သလို
ရိုဟင်ဂျာကိုလည်း တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ အတည်ပြုပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
မစ်စ်အဲရစ်ရဲ့ ဝမ်းမနားသား ထမိန်ရှုတွေရဲ့ ကလေးအတွေးတွေကတော့ အဆင့်နိမ့်လွန်းပါတယ်ကွာ။
CREDIT TO MOE SHIN(IMT)
ကျွန်တော်က “မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်”ရေးခဲ့သူ ဂျူးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သဘောင်္
သားတွေရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကခံစားချက်ကို သူများတွေမြင်အောင်ရေးချင်တဲ့ မိုးရှင်း (I.M.T) ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက
သင်္ဘောသားနဲ့ပက်သက်ရင် အထင်ကြီးနေကြသူတွေရှိသလို မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်ပြီးသင်္ဘောသား
တွေကိုအမြင်ကတ်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က သင်္ဘောသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖူးသူပါ။ဒါကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ သင်္ဘောသားတွေရဲ့ ဘ၀တွေကစစ်သားတွေနဲ့ နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ စစ်သားတွေကသေနတ်
ကိုင်ပြီးသူတို့နဲ့ဥာဏ်ရည်တူတဲ့ လူသားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကလွမ်းဆွတ်မှုတွေရင်မှာပိုက်
သေနတ်တွေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာကမာယာများတဲ့ပင်လယ်ကြီးကို ပြန်လည်အံတုဖို့ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်
ပင်လယ်ဆိုတာ အရမ်းမာယာများပါတယ်။ အခုနေငြိမ်နေပေမယ့် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း သင်္ဘောကြီး
တစ်စီးလုံးမြုပ်သွားနိုင်လောက်တဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးတွေကိုလည်း ဖန်တီးတတ်ပါတယ်။ အခုဗြောင်းဆန်အောင်
လှိုင်းတွေလှုပ်နေပေမယ့်အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ချက်ချင်းလည်း ပြန်ငြိမ်သွားတတ်ပါတယ်။ ရာသီဥတု
အားလပ်ရက်မျိုးဆိုရင်တော့ ထမင်းစားခန်းထဲမှာလူစုံနေလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်မိနေတဲ့နေ့လေး
သင်္ဘောကြီးကလည်း ရှေ့စိုက်လိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ တော်တော့်ကိုအသည်းယားစရာကောင်းနေတယ်။
၀ါရင့်သဘောင်္သားတွေကတော့ မျက်နှာအပြုံးမပျက်ရှိနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘ၀မှာပထမဆုံး
အကြိမ်အဲ့ဒိလောက်ကြီးတဲ့ လှိုင်းမျိုးတွေကို မြင်ဖူးတာပါ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် စိတ်ထဲမှာနည်းနည်း
ကြောက်နေမိပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မျိုး သင်္ဘောမြုပ်သွားရင် အသက်ရှင်စရာအကြောင်းကသိပ်မရှိဘူးလေ။
နေပါတယ်။ လာကယ်မယ့်သူမရောက်ခင်Hypothermia( မှအပူဓာတ်အလွန်အကျွံဆုံးရှုံးခြင်း) နဲ့ပဲသေဖို့
များပါတယ်။ တွေးလေကြောက်လေမို့လို့ကျွန်တော့်အတွေးစကိုရပ်လိုက်ပြီး ထမင်းစားခန်းထဲသွားဖို့ဆုံး
တချို့သူတွေက လှိုင်းမူးလို့ အန်တဲ့သူကအန်နေကြတယ်။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာလည်းထမင်းဟင်းတွေက
ဘယ်သူမှမစားလို့ အရမ်းကိုပိုနေပါတယ်။ အားလပ်ရက်ဖြစ်ပြီးအပြင်မှာလည်းရာသီဥတုဆိုးနေလို့ ထမင်း
ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ပြောတာတွေအားလုံးကိုအခုထက်ထိမှတ်မိနေဆဲပါပဲ။ သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံက
တကယ်တော့လူတော်တော်များများက သင်္ဘောသားဆိုတာ မိန်းမရှုပ်တဲ့သူ၊အရက်သောက်တဲ့သူလို့ပဲမြင်
တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မိန်းမရှုပ်တယ်ဆိုတာ သင်္ဘောသားမှမဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာနေ့တိုင်း
ကလပ်တက်နေတဲ့လူငယ်တွေ အပုံလိုက်အခေါင်းလိုက်ပါ။ အဲ့လိုမသွားတတ်တဲ့ လူငယ်တွေလည်းရှိပါ
တယ်။ ထိုနည်းလည်းကောင်း သင်္ဘောပေါ်မှာလည်းလူတိုင်းမိန်းမရှုပ်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းမ
နောက်တစ်ခုက အရက်သောက်တဲ့ကိစ္စပါ။ သောက်တဲ့သူရှိသလိုမသောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းလို့မျက်လုံးဖွင့်ကတည်းကဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ရေတွေပဲမြင်နေရတဲ့ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ
တစ်ယောက် မဟုတ်ရင် တော်ရုံတန်ရုံ ခံစားပေးလို့မလွယ်ပါဘူး။
မြန်မာဇာတ်ကားတွေထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ဗီလိန်အဖြစ်အမြဲအသုံးချလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့
ဇာတ်ကားတွေထဲမှာအမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့သင်္ဘောသားတွေကဗီလိန်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေဆိုရင်တော့
အနုပညာအရ လုပ်သင့်ပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုလို ဗီလိန်နေရာမှာသင်္ဘောသားတွေကိုထားနေတာကတော့
သင်္ဘောသားတွေကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာ မကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်
အဖြစ်ရိုက်သွင်းနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ရင်းပြီးမိသားစုအတွက် ထမင်းရှာကျွေးနေတဲ့သူတွေကို
ဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ကိုးကွယ် ဘာအလုပ်တွေပဲလုပ်နေလုပ်နေလူနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့
ကောင်းတဲ့သူနဲ့ မကောင်းတဲ့သူ ဆိုတဲ့နှစ်မျိုးပါပဲ။
သင်္ဘောသားဖခင်အချို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့သားသမီးတွေက
အဖေပြန်လာတုန်းတစ်လလောက်တော့ပျော်တတ်ကြတယ်။ မုန့်ဖိုးရတယ်။ သွားချင်တဲ့နေရာတွေသွား
ကြတယ်။ နည်းနည်းလေးအနေကြာလာတော့ “အဲဒိဘဲကြီးပြန်လာကတည်းကငါညဘက်အိမ်ပြင်လည်း
ကောင်းကောင်းထွက်လို့မရတော့ဘူး။”“ ပြန်လာကတည်းကဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့ အရမ်းနားညည်း
ဖို့ကောင်းတာပဲ။”စတဲ့စကားသံတွေကို အခြားကနေကြားသိရပါတယ်တဲ့။ ဒါတွေကသူတို့အဖေတွေကို
ယောက်ထက်ကိုပိုမမြင်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒိလိုအဖေမျိုးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲခဏလောက်ဝင်ကြည့်ရင်တော့
စာဖတ်သူအရည်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမကလည်း ၃လလောက်အထိတော့ဘာမှမပြောသေးဘူး။
၆လလောက်ဆိုရင်တော့ “မောင်ရေသားတွေ သမီးတွေရှေ့ ရေးရှိသေးတယ်လေ။ မောင်သင်္ဘောပြန်
မတက်သေးဘူးလား။ မေလဲမောင့်ကိုဘယ်ခွဲချင်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေ ရှေ့ရေးကရှိသေးတယ်လေ
မောင်ရဲ့”ဆိုတဲ့စကားသံလေးတွေကိုတော့ စကြားရပါပြီ။ ဒီတော့ သင်္ဘောသားကြီးလည်းရင်ဘတ်ဟတ်
ပြက္ခဒိန်ပေါ်ကရက်တွေကို ကြတ်ခြေခတ် သားလေး၊သမီးလေးဓာတ်ပုံညတိုင်းကြည့် ရင်ဘတ်ဗလာနဲ့
ဟာတာတာညတွေကိုမျက်စိစုံမှိတ်ပြီး ဖြတ်သန်းရပြန်ပါတယ်။ ပြန်ရဖို့ရက်နီးလာရင် အရမ်းပျော်နေတတ်
တာ သင်္ဘောသားတွေရဲ့သဘာဝပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ခါ ဒီလိုအချိန်တွေ ကိုပြန်ဖြတ်သန်းရဦးမှာပါလား
လို့တွေးမိလိုက်တိုင်း ၀မ်းနည်းသွားတတ်ကြတာလည်း သင်္ဘောသားတွေရဲ့သဘာဝပါပဲ။ တကယ်တော့
နှလုံးသားတွေကရစရာမရှိအောင်ကြေမွနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မိသားစုအတွက် ကြိုးစားနေကြဆဲပါပဲ။
ဘ၀ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းရတာများတော့ ကျွန်တော်တို့ အသည်း
တွေကအပေါ်ယံမာနေပါပြီ။ ခွဲခွာတယ်ဆိုတာထမင်းစားရေသောက်လိုပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း
ကျွန်တော် ဘာလို့သင်္ဘောသားဖြစ်လာပါလည်းလို့တွေးမိပါတယ်။ ရေကြောင်းသိပ္ပံဆိုတဲ့ ကျောင်းဝရောက်
တဲ့အထိ ဘာကျောင်းမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ် မိဘရဲ့အခြေအနေကြောင့် ပိုက်ဆံမြန်မြန်
သင်္ဘောသားတစ်ယောက် သင်္ဘောမလိုက်တော့ဘူးဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ကြပ်မပြည့်တဲ့ ကောင်လိုဝိုင်း
ကြည့်တာကိုခံရတတ်ပါသေးတယ်။ပိုက်ဆံဒီလောက်ရတာကို ဘာလို့ဆက်မလိုက်တော့တာလဲလို့ မေးကြ
ပါတယ်။ သူတို့ကို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ခက်တာက သူတို့နားမလည်နိုင်လောက်ပါဘူး။တကယ်တော့
သင်္ဘောသားအဖြစ်ကနေ သင်္ဘောမလိုက်တော့တာတော်တော့်ကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ ပိုက်ဆံအများကြီး
ရရာကနေ မြန်မာပြည်မှာ လစာနည်းနည်းနဲ့ နေနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခက်ခက်ခဲခဲဆုံးဖြတ်ရသလဲ
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အိမ်မက်တွေကခေါင်းထဲမှာပြတ်ပြတ်သားသားရှိနေတယ်။ အဲဒါတွေကတစ်နေ့ကျရင်
ကျွန်တော့်အိမ်မက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်အတူနေရတာပိုပျော်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်မက်တွေကိုပုံဖော်ရင်း
ပင်လယ်ထဲမှာသက်စွန့်စံဖျား မိသားစုအတွက် ပိုက်ဆံရှာဖွေနေတဲ့ ညီတော်နောင်တော်များကိုလည်း
အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာပါတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကို မကြေနပ်လို့ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ အမေရိကန်သံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေ သိအောင်လို့လုပ်တာ။
အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာပါတဲ့
ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကို မကြေနပ်လို့ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ
အမေရိကန်သံရုံးက တာဝန်ရှိသူတွေ သိအောင်လို့လုပ်တာ။
ဒါကို ဒီသံရုံးရှေ့မှာ ပြခွင့်မပြုဘဲ သံရုံးကမကြားနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့
ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ခွင်ပြုတာက
နေရာလွဲပေးတဲ့နေရာမှာမပြဘဲ သံရုံးရှေ့ပြရင် ဥပဒေနှင့်အရေးယူမယ်။
မောင်ဖြူ ကိုမကြေနပ်လို့ မောင်ဖြူအိမ်ရှေ့မှာ ပြောခွင့်အော်ခွင့်
တောင်းတာကို မဆိုင်တဲ့ မောင်မဲ အိမ်ရှေ့ ပြောခွင့်အ်ာခွင့်ပြုတယ်။
တော်တေ်ာ တရားကျဖို့ကောင်းတဲ့ အစိုးရပါလား။
U ss M 29-4-2016
အမေရိကန်မှာ ... မြန်မာအစိုးရတွေကို မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် ... ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တည့်တည့်မှာ ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ် ။
YES PROBLEM !!
မြန်မာအစိုးရတွေကို မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် ...
ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တည့်တည့်မှာ ဆန္ဒပြလို့ရပါတယ် ။
S street ဆိုတဲ့ လမ်းပေါ်မှာရှိတယ် ...
ဒီဘက်က ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်စု ရှိပါတယ် ...
လက်ကိုင်အော်လံစပီကာတွေနဲ့ အော်ကြတယ် ...
တစ်ခါတစ်လေ လော်စပီကာကြီးတွေယူလာပြီး ဒီမိုသံချပ်တွေတောင် ဖွင့်တာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့...
ရဲတစ်ယောက်ဘဲ ရောက်လာတယ် ...
ရဲတစ်ယောက်ထဲ ရှိတယ်ဆိုလို့ ...
သံရုံးကို ဥပဒေပ အကြမ်းဖက်ရင်လဲ ဖက်လို့ရပါတယ် ..။
ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးမလွတ်ပေါ့ဗျာ ...
California street မှာ မြန်မာစစ်သံရုံးရှိသေးတယ် ...
နိုင်ငံတစ်ကာက လူကြီးလူကောင်းတွေ လာကြပါတယ် ..။
အသံသေးအသံကြောင်တွေနဲ့ စစ်သံရုံးရှေ့မှာ အော်မလား ...
အမေရိကန်အစိုးရ ခွင့်ပြုတယ် ...။
မအေယိုးခင်ညွန့် ဆဲချင်သေးလား ...
အမေရိကန်အစိုးရ ခွင့်ပြုတယ် ..။ (S street သံရုံးမှာတော့ ဆန္ဒပြတိုင်းဆဲကြပါသည်)
ဦးသိန်းစိန် အမေရိကားကိုလာတယ် ...
အမေရိကန်အစိုးရ ခွင့်ပြုခဲ့တယ် ..။
New York City က ဟော်တယ်ရှေ့မှာ အသံသေးသံကြောင်နဲ့ အော်ဆဲချင်သေးသလား ...
အမေရိကန်အစိုးရ ခွင့်ပြုပါတယ်..။ (ဖိနပ်နဲ့ပါ ထုကြပါတယ်)
မြန်မာသံရုံးတွေ ရှေ့မှာဘဲ ပြလို့ရတယ် ...
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်းလိုနေရာကို မောင်းမထုတ်ဘူး။
အမေရိကန်မှာ အမေရိကန်အစိုးရက ...
အမေရိကန်သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့လူတွေကို ...
ဒီအစိုးရ ကောင်းမကောင်း ခင်ဗျားတို့ဖါသာဘဲ စဉ်းစားကြတော့ဗျာ ..။
နုိုင်ငံတော်အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဦးထင်ကျော်ပြီးလျှင် နုိုင်ငံ၏ နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဟု သမ္မတရုံးက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ
နုိုင်ငံတော်အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတဦးထင်ကျော်ပြီးလျှင် နုိုင်ငံ၏ နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ဟု သမ္မတရုံးက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၆ သမ္မတဦးထင်ကျော်ပြီးလျှင် နုိုင်ငံတော်အတုိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တုိုင်းပြည်၏ နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင်နှင့်အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြီးမှသာလျှင် ဒုတိယသမ္မတ ၂ ဦးက အသီးသီးနေရာတွင်ရှိနေကြောင်း သမ္မတရုံး၏ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ် သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။နုိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက် ထုတ်ပြန်မှုမှာ အောက်ပါအတုိုင်းအဖြစ်သည်။ "နုိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက်" နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ဧပြီ ၂၇ ရက်စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်သတ်မှတ်ချက်အား ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ယင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ် ၁ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ၂ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၃ ဒုတိယသမ္မတ (၁) ၄ ဒုတိယသမ္မတ (၂) ၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၆ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ၇ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ၈ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၉ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ၁၀ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ၁၁ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ၁၂ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၁၃ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၁၄ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ၁၅ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ၁၆ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ၁၇ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ၁၈ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ၁၉ ဝန်ကြီးချုပ်များ ၂၀ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ၂၁ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ၂၂ တပ်မတော်မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ၂၃ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ ၂၄ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ ၂၅ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ၂၆ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ၂၇ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ၂၈ လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ ၂၉ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ ၃၀ တိုင်းမှူးများ ၃၁ ဒုတိယဝန်ကြီးများ ၃၂ ဒုတိယရှေ့နေချုပ် ၃၃ ဒုတိယစာရင်းစစ်ချုပ် ၃၄ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များ ၃၅ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ ၃၆ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများ ၃၇ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ ၃၈ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ
၀ နယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် လွယ်စေး လွယ်လန်း တပ်စခန်းများ ကိစ္စ ရမခတိုင်းမှူးနှင့် SSA/SSPP တို့ ဧပြီ ၃၀ တွင်ဆွေးနွေးမည်
၀ နယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် လွယ်စေး လွယ်လန်း တပ်စခန်းများ ကိစ္စ ရမခတိုင်းမှူးနှင့် SSA/SSPP တို့ ဧပြီ ၃၀ တွင်ဆွေးနွေးမည် --- --- --- အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည့် တန့်ယန်းမြို့နယ် လွယ်စေးလွယ်လန်း ဒေသရှိ SSPP/SSA တပ်စခန်းများအတွက် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် SSA/SSPP ရှမ်းတပ်မတော်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ မနက်ပိုင်းတွင် လားရှိူုးမြို့ ရှိ အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တွင် ဆွေးနွေးကြမည်ဟု သိရသည်။ သံလွင်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်ရှိပြီး မဟာဗျူဟာအရ အရေးပါကာ သံလွင့်မြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ ၀ နယ် မိုင်းလင်းဒေသအား လက်နက်ကြီးဖြင့် ခြိမ်းခြောက်နိုင်မည့် လွယ်စေးလွယ်လန်းဒေသရှိ SSA/SSPP စခန်းများအား ဖယ်ပေးရန် ဧပြီလ ဒုတိယပတ်အတွင်းက ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ ဆီမလို ကိုရီးယား ဒယ်အိုးလေးတွေ...
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက် ... လမ်းတစ်လမ်း ငါးနှစ်...
မနေ့အိပ်မပျော်တာနဲ့ Fb နဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာ ကြိုက်တာ...
၂၀၁၆ ဧပြီ သတင်းအကျဉ်းချုပ် ----------------------...
နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ပြီ ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ...
ရိုဟင်ဂျာကို မကန့်ကွက်ချင်လို့ ပြည်သူတွေအာရုံပြောင...
အမေရိကန်သံရုံးက ထုတ်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာပါတဲ့ ရိုဟင်ဂ...
အမေရိကန်မှာ ... မြန်မာအစိုးရတွေကို မကျေနပ်ဘူးဆိုရင...
၀ နယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် လွယ်စေး လွယ်လန်း တပ...
အိမ်သာဆေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ .. ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီ...
အကျီချွတ် အခန်းပြင်ထွက်အိပ်ပြ၊ ဟင်းတခွက်နဲ့ စားပြ၊...
ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကထွက် ******************...
ဖယောင်းတိုင်ထွန်း အစည်းအဝေးလုပ်ပြသူနဲ့ အိမ်ထဲပူလို...
အစိုးရက သိုဟန်ဘွားဖြစ်လာရင် ပြည်သူတွေလည်း မင်းကြီး...
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နာရီကပဲ ... စစ်ကိုင်း ဆန္ဒပြ အလုပ်သမ...
ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်း ... နူတ်ထွက်စာတင် ...
မနေ့ က ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့... အမေရိကန်သံရုံးရဲ့.....
ပြောင်းလဲ မှု့အပေါင်း သရဖူဆောင်းတော့သည် အေးလေ..နော...
ဒီ ပို့စ်လေးကို သေချာ ဖတ်စေချင်တယ်… ဘာသာခြားတွေ ဘယ...
ဥရုချောင်းထဲက အငြင်းပွားဖွယ် ကျောက်စိမ်းတူးဖော်မြှု...
မန္တလေးတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ြေ...
ရပ်ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ပြန်ရွေးဖို့ သမ္မတရုံး...
မုဆိုးမ တိုင်းပြည် ^^^^^^^^^^^^
မိုးကောင်းမြို့ လဝကရုံး ပါအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းများရှိ...
NLD ecအဖွဲ့ကလက်မခံဘူး စိတ်ဆိုးပြီးအစည်းအဝေးအခန်းကထ...
စစ်တက္ကသိုလ်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဗိုလ်လောင်းသေဆုံးမှူ့...
၄တန်း နဲ့၈တန်း စာမေးပွဲ ကျတဲ့ သူတွေ ... အရင် အဘ...
သိမ်းဆည်းခံ လယ်ယာမြေများကို အစိုးရမှ ဥပဒေနှင့်အညီ ...
ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၆၃၉၁၁၈၂၁ ၀၉၄၅၁၃၃၀၁...
ခြောက်လအတွင်းမှာ လူငါးယောက် တိုက်ထားတဲ့ ကားလေးပြန်...
"ဝန်ထမ်းကောင်းမှ နိုင်ငံကောင်းမည်… လစာကောင်းမှ ဝန်...
ကျနော် လေးစားရတဲ့ ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းရဲ့ ဦးရေ...
မင်းတို့တွေ အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတာလား #####...
ကောလင်းမြို့နယ် လာကာ ကျေးရွာတွင် မိုးသီးကြွေကျမှြုေ...
အလိုလေးလေး ကုလားဖြူ မယားနောက်လိုက် ပေစုတ်စုတ်ငှက် ...
မန္တလေးသားတွေ လုပ်လိုက်ရင် အဆန်းကြီးပဲ အလှူ့ဒါယကာ...
ကျော်တို့စားနေတယ့် ကွမ်းစား ထုံးတွေကို ထုံးကျာက်ေ...
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ကံကြီးရွာက ဆိုလာပြားတွေ မိုးသီးန...
မြစ်ကြီးနား ၊ ဖားကန့် နေပူပါတယ် ။လောလောဆယ် မိုးရ...
ဇနီးမယား (၁၃)ယောက်တိတိအား တချိန်တည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်...
ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ က အခု မဝေဖန်ဘဲ ... ဘယ်တော့မ...
ထူးခြား မိုး လေ ဝ သ ဖြစ် စဉ် များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် …...
မစ်ကြီးနားမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ၂ ပေခန့် မြင့်တက်...
မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်လမ်းပိုင်းသွား ယာဉ်ငယ်များ တို...
သတင်းစာတွေရဲ့ အဦးပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေ ထည့်တာ ...
မြစ်ရေကြီးမှု အသိပညာပေးဆောင်ရွက် ••••••••••••••••••...
စစ်ကိုင်းတိုင်း ပင်လယ်ဘူးနှင့် ကောလင်းမြို့နယ်အတွင...
မိစ္ဆာမင်းပြောင်း နိမိတ်မကောင်း ဘုရားထီးဆောင်း တွေ ...
လာလီဂါပွဲစဉ် (၃၅) လက်ကျန်ပွဲများ အကြို သုံးသပ်ချက်...
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က မိုးတိ...
မန်စီမြို့နယ်တွင် KIA အဖွဲ့မှ အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင...
တို့ အစိုးရ တက်လာ ခါနီး မဲဆွယ်တော့ ရေတွေ ရေတွေကြ...
သူရဦးရွှေမန်း အပါအဝင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအကြီးအကဲများ...
ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စဟာ ... ဘာသာရေး ကိစ္စမဟုတ်ပါ ... ဒါကို NL...
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် တစ်ယောက် - - - - - - - - - - - -...
ဘင်္ဂလီ တုိ့၏ နယ်မြေလုပွဲ .
မိမိတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ဒီငါးသုံးကောင်အကြောင်း ပြော...
စည်းကမ်းမဲ့ ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်းပပျောက်ရန် နိုင်ငံ...
လူ ၅၀၀ လောက်သေတာကို အမေရိကန်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ က မစိုးရိမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) မျှော်လင့်ချက် အလင်...
ဘောလုံးပွဲကြည့်ချင်သလား၊ ဘီယာဆိုင်ကို သွားစို့လား
မန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇တွင် ၈ ဒသမ...
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဗား ကရာလမ်းရှိ ကျွန်းတောကျောင်...
ဘင်္ဂလားနယ်ခြားစောင်တပ်ဖွဲ့မှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ၃၄၀...
ရေအိုင်ထဲကခွေး (တစ်မိနစ်အချိန်ပေးနိုင်ရင် ဖတ်သွား...
ကန်ကြီးထောင့်မှာ မိထွေးက ကလေးကို ရေနွေးပူနဲ့လောင်း...
မုံရွာမြို့တွင် မိုးရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု...
ငှက်ကလေးတွေ ဖတ်စာ ..
Opera browser တွင် အခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်လာ
ဘန်ကောက်တွင် 4.5G အသုံးပြုနိုင်
ကံထူးအောင်ယာဉ်လိုင်း ကားခပိုတောင်းခြင်း စစ်ဆေးတွေ့...
ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်း အာမခံဖြင့် မန္တလေးအကျဉ်းထောင်မှလွ...
မြို့ကြီးများရှိ မြေဆီလွှာအောင်းရေ ခြောက်သွေ့အဆင့်ေ...
ရှောင်လေ ကောင်းလေ `ဒို့မိတ်ဆွေ´ နှင့် facebook ပေါ်...
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရွှေတောင်ဈေးထဲက ကောင်းစံရွှေဆိုင...
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် စေတောင်ရွာသို့စစ်ပြေးရှောင် ၂၀...
ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေခံ အလုပ်သမား လုပ်ခများ တိုးပေးရန...